कहाँ हराउनुभयो यी महिला ? | सहारा टाइम्स
Home » madhesh » कहाँ हराउनुभयो यी महिला ?
कहाँ हराउनुभयो यी महिला ?
कपिलवस्तु, पुस १९ गते । यहाँ एउटै वडाका दुई जना महिला बेपत्ता भएका छन् ।
म घर आईपुगेँ भनेर आफूलाई समेत फोन गरेको उनकी आमाले बताउनुभयो । माइत गएको धेरै दिन भयो, भाउजु अझै आउनु भएन भन्दै नन्दले माइतमा फोन गर्दा बल्ल हराएको पुष्टि भएको हो ।
उनकी सासूले गहभरि आँशु पार्दै भन्नुभयो, “हाम्रा आफन्त भएका सबै ठाउँमा खोजियो कतै पत्ता लगाउन सकिएन, अरुभन्दा नि नातिको सारै याद आउँछ ।”
यस्तै, यही पुुस ५ गतेदेखि बेपत्ता भएकी अर्की महिला राधाको घटना भने फरक छ । मलाई कसैले नखोज्नुहोला भन्ने एक पान्नाको चिठी लेखी घरमा छोडेकी राधा कहाँ गइन् भन्ने अहिलेसम्म पत्ता लाग्न नसकेको उनका ससुरा छन्दबहादुर परियारले बताउनुभयो ।
पत्रमा कुनै ठाउँमा जान्छु भनेर स्पष्ट नलेखेको परियारले बताउनुभयो । सबै ठाउँमा खोजी गरिएको तर अहिलेसम्म पत्ता लगाउन नसकिएको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ ।
गीता गुरुङका श्रीमान् मलेसियामा र राधाका श्रीमान् ओमनमा हुनुहुन्छ । दुवै परिवारले इलाका प्रहरी कार्यालयमा खोजिदिनका लागि निवेदन दिएको र खोजीकार्य भइरहेको प्रहरी निरीक्षक राजु कार्कीले जानकारी दिनुभयो । दुवै परिवारले खोजिदिनका लागि सबैसँग आग्रह गरेका छन् ।